Beesha caalamka oo war kasoo saartay doorashada Dhuusamareeb – Idil News
Beesha caalamka oo war kasoo saartay doorashada Dhuusamareeb
Posted By: Idil News Staff January 28, 2020
Beesha caalamka,ayaa ugu baaqday dhammaan saamileyda siyaasadda Galmudug in ay diiradda saaraan baahida loo qabo in ay ka wada qeyb-galaan hanaan heli kara taageero ballaaran, islamarkaana ka fogaadaan halista xasillooni darro iyo dagaal.
“Beesha Caalamka waxay garowsan yihiin in dadaallo muhiim ah oo arrintan ku saabsan la sameeyey toddobadii bil ee tagay. Tani waxay sahashay in heshiisyo laga gaaro qeybsashada kuraasta, waxaana bogaadineynaa tanaasulka ay dhammaan dhinacyada u sameeyaan danta Galmudug.”
Beesha Caalamka,ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada Galmudug in ay ka howl-galaan in ay khilaafyadooda ku xaliyaan wada-hadal, islamarkaana ay qaataan waqtiga dheeriga ah ee lagama maarmaanka ah, si ay sidaas u sameeyaan.
“Beesha caalamka waxay ku baaqaayaan in tallaabooyinka ka harsan hanaanka doorashada loo qaado si la mid ah tanaasulladii horey loo sameeyey ee dhaliyey horumarka ilaa hadda la gaaray, si Galmudug ay ugu guuleysto hadafyadeeda dhameystiran ee danta u ah shacabka Galmudug.”